Fitsidihana ara -pomba fanajana nataon’ny tale–jeneralin’ny FAO tao amin’ny Antenimierandoholona - Madagascar Informations
30 août 2016 11 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire FAO
Nitsidika tamim-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Honoré RAKOTOMA NANA, tetsy amin’ny Lapan’Anosikely ny talata faha-30 Aogositra 2016, ny talen’ny FAO GRAZIANO da SILVA sy ireo Mpiara miasa aminy.
Nifantoka betsaka tamin’ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ ny Nosy ny resaka teto, izay notsahivin’Andriamatoa Tale Jeneraly José GRAZIANO da SILVA fa avo dia avo ny tahany. Nambarany fa hiova izany afaka herin’andro satria ho lasa ny El Nino nampisy haintany be teo, ka hisolo an’i La Nina izay hitondra orana betsaka. Mandritra ny telo volana hoy Andriamatoa Tale Jeneralin’ny FAO, dia ho afaka hamboly ny tantsaha any Atsimo, kanefa ny tena tokony hatao koa, dia ny hitazona ny rano avy amin’ireo orambe ireo mba tsy ho verivery fahatany ; manana teknika lafo nefa tsotra amin’izany ny FAO hoy Andriamatoa Tale Jeneraly ka noho izany, dia mila tohana lehibe tokoa i Madagasikara.
Manana andraikitra lehibe amin’ny fandaniana ireo lalàna samihafa amin’ny fanataterahana ny paik’ady izay hatolotra ny Governemanta ny Antenimierandoholona, hoy hatrany Andriamatoa José GRAZIANO da SILVA nanazava ny heviny amin’ny tokony hananganana manda parlemantera (Front parlementaire) sahala ny efa misy any afrika amin’izao fotoana izao, toy ny zava misy ihany koa eo anivon’ny sehatra panafricain.
Fa isan’ny zava-dehibe koa ny nambaran’ny Tale Jeneralin’ny FAO ny amin’ny fisian’ny sahan’asa iarahan’ny samy firenena andalam-pandrosoana, ka nilazany fa azony atao tsara ny mampifandray ny parlementera Malagasy amin’ireo firenena izay heverina fa efa manana traikefa bebekokoa eo amin’ny fananganana izay “ front parlementaire” izay.
← Madagascar Informations à Andasibe – Festival Indriindry
Madagascar de 1991 à 1996 →
10 octobre 2017 Madagascar Informations 0
Réunion de tous les directeurs de cabinet
17 février 2017 Gasikara 0